ဖခင်များနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာလက်ဆောင်များ | Gadget သတင်း
လာမည့်တနင်္ဂနွေသည်“ ဖခင်များနေ့” ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လက်ဆောင်မရရှိသေးသဖြင့်ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားလက်ဆောင်ပေးလိုပါသည် သင်၏ဖခင်ကိုပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာလက်ဆောင်များ သင်လုံးဝလုံခြုံရေးနှင့်အတူသင်မှန်လိမ့်မည်ဟုကြိုတင်သတိပေးထားပြီးသောသူတို့နှင့်အတူ။
ထို့အပြင်အလွန်ရိုးရှင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပြတော့မည့်အရာအများစုကိုအမေဇုန်တွင်တွေ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို ၀ ယ်ရန်နှင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိရန်ထားရှိသော link ကိုလိုက်ရုံသာ။ မင်းရဲ့အိမ် သင်၏ဖခင်အတွက်လက်ဆောင်ဝယ်ရန်သင်လိုအပ်လျှင်အချိန်ပိုမယူပါနှင့်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောရွေးစရာများအနက်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
2 Netflix မှာကြေးပေးသွင်းခြင်း
4 အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်း၊ Moto G4 Plus
5 အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း၊ Samsung Galaxy S7 Edge
6 Spotify မှ Subscription
9 Nintendo ပြောင်းလဲမည်
အသက် ၃၀ နှင့် ၄၀ ကြားရှိကလေးငယ်များရှိသောမိဘများသည်စျေးကွက်သို့ပထမဆုံးသွားသည့်ခလုတ်များထဲမှကလေးများအားကစားခြင်းနှင့်အတူနာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ NES အကြောင်းပြောနေတာကအခုပြန်လာပြီ Nintendo Classic Mini ပြီးတော့ဂိမ်းသုံးဆယ်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပျော်မွေ့ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။
ဒီပစ္စည်း၏ရရှိနိုင်မှုသည်ကြီးမားသောပြisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တရားဝင်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၆၀ ဖြစ်သော်လည်းယူနစ်များကိုရှာရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ အမေဇုံတွင်မည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိဘဲ ၀ ယ်နိုင်သည်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းသည် ၁၂၅ ယူရိုအထိရှိသည်။
ချဲ့ခြင်းမပြုရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည် Netflix မှာကြေးမည်သည့်မိဘမဆိုအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အမြောက်အများကိုခံစားနိုင်သည်။
စျေးနှုန်း ၉.၉၉ မှစတင်သည်, သင်၏အဘနှင့်အတူမျှဝေနိုင်ဖြစ်ခြင်း, ထိုလက်ဆောင်သည်စျေးအသက်သာဆုံးမှထွက်။ သင်၏ဖခင် Netflix ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်သင်စာရင်းသွင်းရန်မည်မျှကြာမည်ကိုသတိပြုပါ။
Netflix ကိုစာရင်းသွင်းပါ ဒီမှာ.
စျေးကွက်ထဲတွင်တွေ့နိုင်သောစျေးအသက်သာဆုံး ၀ တ်စုံဖြစ်သည် နီးပါးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် Xiaomi က Mi Band S1 ကို၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်စက်ချိန်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ဖခင်သည်အားကစားကိုနှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ဤလက်ဆောင်ဖြင့်သင်သေချာပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မကောင်းတဲ့သတင်းကမင်းအဖေကိုဒီဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတာသေချာတယ် Mi Band S1 တရုတ်အက္ခရာများအကြားအရူးသွားစရာမလိုဘဲ။
အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်း၊ Moto G4 Plus
သင်ရှာနေသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းသည်သင်စျေးကွက်ထဲရှိအလယ်အလတ်တန်းစားဟုခေါ်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည် Moto Plus အား G4။ ၎င်းတွင် ၅.၅ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ရှိပြီး Full HD resolution၊ 5.5GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 2GB ရှိသည်။
အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း၊ Samsung Galaxy S7 Edge
အကယ်၍ ငွေသည်ပြnotနာမဟုတ်ပါက၊ အဆင့်မြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ပြောနေတာ Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge ဒါကမင်းကိုမင်းအခွင့်ကောင်းယူချင်မှလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ကင်မရာသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်မှတ်ဉာဏ်မဆိုအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားခြင်းအပြင်သင့်အား၎င်းကိုကြီးမားသောအရည်အသွေးဖြင့်လုပ်ဆောင်စေလိမ့်မည်။
Spotify မှ Subscription
သင်၏ဖခင်သည်စီးရီး (သို့) ရုပ်ရှင်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါကသင်တေးဂီတကိုပိုနှစ်သက်မည်ဆိုလျှင်သူသည် Spotify ကိုစာရင်းပေးသွင်းလိုစိတ်အမြဲရှိနိုင်သည်။
Spotify မှစာရင်းသွင်းပါ ဒီမှာ.
စာအုပ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ဖတ်လိုသောမိဘတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောစာအုပ်များနှင့်၎င်းတို့အတွက် eReader သည်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်စရာများစွာအနက်အကောင်းဆုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အမေဇုံ Kindle.
ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲချင်သောငွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အိုအေစစ် Kindleအဆိုပါ Kindle ရေကြောင်းအဆိုပါ Kindle Paperwhite သို့မဟုတ် အခြေခံ Kindle။ အကယ်၍ သင်၏အဖေသည် eBooks ကိုနှစ်သက်။ သူ၏တစ်နေ့တာစာဖတ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးကိရိယာနှင့်သွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်အသုံးပြုမည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းယုံကြည်မှုမရှိလျှင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကတွင်စတင်ရန်အခြေခံ Kindle၊ ပြီးပြည့်စုံသောအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။.
စမတ်နာရီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်၏ဖခင်အားလက်ဆောင်ပေးရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစားအမြောက်အမြားကိုစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ Samsung Gear S3 Frontier.
သင်ဤမျှလောက်ငွေမသုံးချင်ပါကသင်ရွေးနိုင်သည် Moto 360, un Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ်ပင်အချို့သောအချို့သောပင်စျေးနှုန်းချိုသာ options များ Sony ကစမတ်နာရီ 3.
သင်၏ဖခင်သည်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူ့ကိုပေးရမည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်အသစ်ဖြစ်သည် Nintendo ပြောင်းလဲမည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်၎င်းသည်သင့်ကိုယူရိုအနည်းငယ်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Amazon ကနေတဆင့်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းမနက်ဖြန်အိမ်မှာမင်းကြိုက်နှစ်သက်ရာဂိမ်းနဲ့ဂိမ်းကစားနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အဖေကရက်နဲ့နေ့တွေအများကြီးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုမပြုခင်မှာပြုလုပ်နိုင်တယ်။ သင်၏ဖခင်နှင့် Nintendo console အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခြားဂိမ်းများဥပမာအားဖြင့် Zelda နှင့်အခြားဂိမ်းများကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
"အဖေများနေ့" အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရွေးပြီးပြီလား။။ ဤစာမူအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ သင်၏စိတ်ကူးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်အားနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » သင်၏ဖခင်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ နည်းပညာများအရအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Uptime ဟုခေါ်သော YouTube လူမှုရေးကွန်ယက်ကို Google ကစတင်ခဲ့သည်
Rocket League ကိုဂိမ်းအသစ်တစ်ခုနဲ့အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်